LTU Info-Sharing Session (Scholarship up to USD 6,000) evento
21. Janeiro 2018 - 13:30 até 15:00
LTU Info-Sharing Session (Scholarship up to USD 6,000), Mundo, Domingo, 21. Janeiro 2018
LTU Info-Sharing & Admission Day (Scholarship Available up to 6,000 USD)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များမှ ဘွဲ့ ရများအား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုကို သုသေနပြုလုပ်ထားသည့် Destination of Leavers from Higher Education (DLHE) ၏ Survey အရ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် ကျောင်းများအားလုံးကို ဖြတ်ကျော်ကာ အဆင့် ၁၇ နေရာတွင် ရပ်တည်နေသည့် Leeds Trinity University နှင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီပညာရပ်များကို မြန်မာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်သင်ယူစရာမလိုဘဲ လက်လှမ်းမီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရန် သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ ချပေးလျက်ရှိသော Myanmar Metropolitan College တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် BA (Hons) Business and Management programme အတွက် Scholarships များကို
Info-Sharing & Admission Day နေ့ တွင် Myanmar Metropolitan College ၏ Principal & College Director ဖြစ်သည့် ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းစိုး နှင့် Leeds Trinity University မှ Deputy Vice Chancellor ဖြစ်သည့် Mr. Raymond Ian Llyod တို့မှ Leeds Trinity University တက္ကသိုလ်နှင့် ပတ်သတ်သည့်အကြောင်းအရာများ၊ LTU နှင့် MMC တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် BA (Hons) Business and Management programme ၏ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်း ဟောပြောသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်လာ ၆၀၀၀* တန်ဖိုးရှိ Scholarships များကို Leeds Trinity University ၏ BA (Hons) Business and Management Programme ၏ အကြောင်းကို လာရောက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်း အပ်နှံသူများအား LTU Info-Sharing ပွဲအပြီးတွင် MMC Yangon Campus ၌ ၀င်ရောက် ဖြေဆိုခွင့် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
LTU Info-Sharing & Admission Day အစီအစဉ်ကို အောက်ပါ အစီစဉ်တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
LTU Info-Sharing & Admission Day (Scholarship Available up to USD 6,000)
■ Speakers : Principal & College Director of MMC, Daw Khin Hnin Soe
Deputy Vice Chancellor of LTU, Raymond Ian Llyod
■ Date	: (Sunday)
■ Time	: 1:30 PM - 3:00 PM
■ Venue	: MMC Yangon Campus
No (232), Bargayar Street, Myay Ni Gone,
စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို အခမဲ့ စာရင်ပေးသွင်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
နေရာအခက်အခဲကြောင့် လူဦးရေ ကန့် သတ်ထားပါသဖြင့် ပွဲတက်ရောက်ရန် စာရင်းပေးသွင်းလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၂၆၃၃ ၃၄၂၂၃ နှင့် ၀၉ ၂၆၃၃ ၃၄၂၂၄ သို့ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
MMC Mandalay Campus: Unit 3, Block (4), Mingalar Mandalay, Mandalay
LTU Info-Sharing Session (Scholarship up to USD 6,000)